Umboneleli weBhokisi yokuGcina iMoto
Umzi-mveliso we-Car Foot Mat
Ibhabhathane Elimnyama Elihonjiswe Kwisitulo Sesitulo Semoto
I-Vehicle-Mounted Pet Mat
Ibhegi yokugcina isihlalo esingemva semoto: ibhokisi yokugcina isitulo ngasemva esongelayo, ilungele iimoto, iilori, iilori, iijeep okanye iiSUV-ibhokisi enkulu yokugcina isithuthi kunye nebhokisi yegrosari.
Ibhokisi yokuGcina iMoto
Iimveliso zethu zahlukile kuyilo, ziguquguquka kwaye kulula ukuzisebenzisa. Imodeli nganye yenziwe ngesandla kwaye yomelele, nto leyo yongeza lula lula kwisithuthi sakho. Lo mgqibi we-trunk onzima wenziwa kuphela ngezona zinto zilungileyo, kuba sinethemba lokuba unokuyonwabela kwiminyaka embalwa ezayo. Yenziwe nge-600 denier polyester. Ngenxa yodonga oluqinileyo olusecaleni kunye nepleyiti esezantsi, yomelele kwaye iqine kakhulu, kwaye iyakugcina ukumila kwayo.
Enoba ubathumela esikolweni abantwana bakho, yiya evenkileni ukuze uthabathe izinto ngokukhawuleza okanye uye kwiintlanganiso zoshishino, yonke le misetyenzana yemihla ngemihla ifuna ukuba ugcine okuthile emotweni. Ngoku, ekuphela kwengxaki kukuba izinto ezisemva kwayo zisenokuba zimbi kakhulu, ezisenokufana neendawo zentlekele. Ngaba udiniwe kuko konke ukuchitheka kunye nesiphithiphithi esikhwela lula kwi-trunk yemoto yakho? Akhonto icaphukisa njengokuva yonke igrocery ilahlwe esiqwini endleleni. Ukuba kunjalo, udinga umququzeleli womqolo! Umququzeleli oyintloko unegumbi eliphambili elibanzi, elinokuthi lifake ngokulula izixhobo ezahlukeneyo. Iipokotho zenetha zangaphandle kunye neepokotho ze-flap zisetyenziselwa ukugcina izinto ezincinci. Ngoku awudingi ukuguqula itoni yezinto ukuze ufumane apho zingcwatywe khona. Xa ungamdingi umququzeleli, ungayiguqula ibe yingxowa yokugcina. I-trunk finisher yenziwe ngelaphu eliphezulu le-600D le-Oxford, kwaye udonga olusecaleni kunye nepleyiti ephantsi yomelele kakhulu, ekwazi ukuthwala imikrwelo emininzi kwaye igcine isakhiwo sayo esomeleleyo, akukho ngxaki! Imoto ecocekileyo yimoto eyonwabileyo! Ngoko musa ukulinda, fumana umququzeleli oyintloko kwaye uqale ukulungelelanisa! Ukuba unayo nayiphi na ingxaki malunga nomququzeleli we-trunk, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi
Ngaphambili: Hight Quality Seat Cover
Okulandelayo: I-Automobile Electrostatic Film Side Block
Ibhokisi yoMququzeleli weSuv
Suv Trunk Box
Ibhokisi yoMququzeleli weTrunk
I-Automobile Electrostatic Film Side Block
I-Automobile Sunshade Anti-Mosquito Screen Window...
I-PEVA yeMoto yoMqhaphu yeMoto yekhephu iShield yelanga ejiyileyo ...
© Copyright - 2020-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe.
Iintsuku ezisi-7 ngeveki ukusuka ngo-10:00 kusasa ukuya ku-6:00 ngokuhlwa
Buza Ngoku Buza Ngoku